YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, August 20
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/20/20080အကြံပြုခြင်း
stat2 - UploadaDocument to Scribd
Read this document on Scribd: stat2
Wed Aug 20, 8:56 AM ET
YANGON, Myanmar - U.N. Secretary-General Ban Ki-moon is planning to visit Myanmar at the end of this year to hold talks on the country's political problems, the main opposition party said Wednesday.
National League for Democracy party spokesman Nyan Win said it was informed of the planned talks by visiting U.N. special envoy Ibrahim Gambari.
Gambari met Wednesday with five executive committee members of the party, which is led by detained Nobel peace laureate Aung San Suu Kyi. He arrived Monday onafive-day mission to promote national reconciliation and political reform.
It is Gambari's fourth trip to the military-ruled country sinceadeadly crackdown on anti-government protesters last September sparkedaglobal outcry.
Ban last visited Myanmar in May to lobby for the country's rulers to open up to more foreign assistance and aid workers in the wake of the devastating Cyclone Nargis, which killed more than 84,537 people and left more than 1 million homeless.
The U.N. chief avoided political issues during that trip, which Gambari described as "humanitarian," according to Nyan Win. He said the envoy told party officials that the visit planned for the last week of December would be solely political.
Myanmar, also known as Burma, has been inapolitical deadlock since 1990, when Suu Kyi's party wonageneral election but was not allowed to take power by the military, which instead has dictated the terms and timing ofareturn to democracy.
Gambari told the party executives that Ban's visit was one of five matters he was tackling during his current visit, according to Nyan Win. The others matters include seeking the release of political prisoners, including Suu Kyi.
Gambari had been expected to meet with Suu Kyi on Wednesday, but did not do so. However, he told the party officials he would try to see her. Suu Kyi has spent more than 12 of the past 19 years under house arrest.
Gambari on Tuesday toured cyclone-hit Kunyangone township south of Yangon and met the government spokesmen team set up to liaise with the U.N., the state-run New Light of Myanmar newspaper reported.
The military has ruled the Southeast Asian nation since 1962 and has been widely criticized for suppressing basic freedoms and human rights.
The United Nations hasapoor record in Myanmar. Its envoys have visited the country nearly 40 times since 1990, along with other senior officials, while the U.N. General Assembly has passed numerous resolutions calling for change.
To date, the ruling generals have virtually ignored such pressure.
စီးပွားရေးမနိုင်ကြောင်း စစ်အစိုးရ ၀န်ခံချိန်တန်ပြီ (၁၈-၈-၀၈)
အက်ဖ်အီးစီ ငွေလဲနှုန်းစနစ်ကြောင့် နာဂစ်အတွက်ကူညီနေသည့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး ဒေါ်လာ သန်း (၂၀) ကျော်
အရှုံးပေါ်၏။ ထိုကိစ္စအတွက် စစ်အစိုးရ အရှက်ကွဲ၏။ သို့တိုင် စီးပွားရေးစနစ် စီမံခန့်ခွဲမှု မှားယွင်းနေကြောင်း
၀န်မခံ။ နောက်ဆုံး မြန်မာစစ်အစိုးရ၀န်ကြီး ဦးစိုးသာက အောက်လမ်းနည်းဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်ဟု ဖြေရှင်း
နာဂစ်အတွက် လူမှုရေးအကူအညီ ပစ္စည်းများ ၀ယ်လိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရောင်းသူ၏ ဒေါ်လာ ဘဏ်စာရင်းထဲ
၀ယ်သူက ဒေါ်လာ တိုက်ရိုက်ငွေချေသည့်နည်းကို ၀န်ကြီးဦးစိုးသာက အကြံပြု၏။ ရောင်းမည့်သူတွေထဲမှာ အများ
စုက စစ်အစိုးရနှင့် ပတ်သက်သူတွေ၊ စစ်အစိုးရနှင့် ပတ်သက်သည့် အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုလျှင် မည်သူ့ အိတ်ထဲ
ရောက်မည်ကို အလွယ်တကူ တွက်နိုင်၏။ အက်ဖ်အီးစီနှင့် လဲလျှင်လည်း စစ်အစိုးရမြတ်၏။ ရောင်းသူကို ဒေါ်လာ
နှင့် တိုက်ရိုက်ချေလည်း ကိုယ့်လူတွေချည်း ဖြစ်၍ စစ်အစိုးရမြတ်၏။ ထိုအချက်ကို အလှူရှင်နိုင်ငံတွေ မည်မျှလိုက်
လျောမည်ကို စောင့်ကြည့်ဖို့ လို၏။
ယခုကဲ့သို့ ကုလသမဂ္ဂ အရှုံးပေါ်ရသည်မှာ အက်ဖ်အီးစီကို ဒေါ်လာနှင့် တန်ဖိုးညီအောင် စစ်အစိုးရဘက်က ကျား
ကန် မပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်၏။ မှောင်ခိုဈေးကွက် ငွေလဲနှုန်းပေါ်ရခြင်းသည် တရားဝင်မြန်မာငွေနှင့် ဒေါ်လာတန်ဖိုးလဲနှုန်း ယုတ္တိမရှိသည့်သဘောဖြစ်၏။ မြန်မာငွေတန်ဖိုး ချပေးဖို့လို သည့် အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်၏။
မြန်မာငွေတန်ဖိုးကို ချမပေးခြင်းကြောင့် အဆိုပါပြဿနာမျိုးတွေ ပေါ်လာခြင်းဖြစ်၏။ ထိုအချက်သည် စစ်အစိုးရ၏
စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းသည့်အချက်ကို ပြနေ၏။ ထိုအချက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်သည့် အရပ်ဘက်
အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် အမြန်လိုအပ်နေကြောင်း စစ်ခေါင်းဆောင်များ သိဖို့လို၏။
စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် စီးပွားရေးတိုးတက်သည့် နိုင်ငံဟူ၍ ကမ္ဘာမှာ သာဓကမရှိ။ တနှစ်တာမျှ အုပ်ချုပ်
ခဲ့သည့် ထိုင်းစစ်အစိုးရကိုပင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု နောက်တက်သည့် အရပ်
သားအစိုးရက အပြစ်တင်ခဲ့၏။ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ သင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်း၏။
စင်စစ် မြန်မာငွေတန်ဖိုး ချပေးသင့်သည့်ကိစ္စသည့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်းကစပြီး နိုင်ငံတကာက မေးခွန်း
ထုတ်နေသည့် ပြဿနာဖြစ်၏။ မြန်မာငွေတန်ဖိုး ချမပေးခြင်း၊ မြန်မာငွေကို နိုင်ငံတကာငွေကြေးနှင့် အလွယ်တကူ လဲမရခြင်းတို့ကြောင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး တိုးတက်မှုကိုပါ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရ၏။
သို့သော် မြန်မာငွေတန်ဖိုး ချပေးလျှင် ဈေးနှုန်းတွေ ရုတ်တရက် တက်လာမည်၊ ငွေဖောင်းပွမှု ခုန်တက်လာမည်၊ အလုပ်လက်မဲ့တွေများပြီး လူမှုရေးအုံကြွမှုတွေ ဖြစ်လာမည်ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်းကတည်းက မြန်မာစစ်
မြန်မာငွေကိုသာ တန်ဖိုးချပေးရမည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF)၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ် စသည့် ငွေ ကြေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူအညီမပါဘဲ လုပ်နိုင်ဖို့ မလွယ်၊ အဆိုပါ ပြဿနာတွေ ကာမိဖို့၊ အစိုးရ အထောက်
အပံ့တွေပေးဖို့ ဒေါ်လာ သန်း (၂) ထောင်နှင့် (၃) ထောင်ကြား လိုမည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးတင်ဝင်း ၁၉၉၅
သို့သော် မြန်မာစစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်နေသရွေ့ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IMF)၊ ကမ္ဘာ့ ဘဏ်တို့က အကူ
အညီ မပေးနိုင်အောင် အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်ထား၏။ သန်း (၂) ထောင် မပြောနှင့် (၁) ဒေါ်လာပင် မပေးခဲ့။
ဤတွင် ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက်သည့် စစ်အစိုးရက မသိမသာ ငွေတန်ဖိုးချသည့် သဘောဖြင့် အမေရိကန် (၁)
ဒေါ်လာနှင့် ညီမျှသည်ဆိုသည့် အက်ဖ်အီးစီကို ထုတ်ခြင်းဖြစ်၏။ အက်ဖ်အီးစီ စထုတ်ပြီးကတည်းက မှောင်ခို
ဈေးကွက်မှာ ဒေါ်လာဈေးနှင့် အက်ဖ်အီးစီ ညီမျှသည်ဟူ၍ မရှိ။ အက်ဖ်အီးစီတန်ဖိုးကို စစ်အစိုးရက ဒေါ်လာနှင့်
ညီအောင် ကျားကန်မပေးနိုင်သည်နှင့်အမျှ အက်ဖ်အီးစီတန်ဖိုး ပို၍ကျလာ၏။ ထို့ကြောင့် နာဂစ်ကူညီသည့် ကုလ
အဖွဲ့ကြီး ခွက်ခွက်လန်အောင် အရှုံးပေါ်ရခြင်းဖြစ်၏။
ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်မောင်၏ တချိန်က နေပြည်တော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြောဆိုချက်အရ ၂၀၀၆
ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လည်ပတ်နေသည့် အက်ဖ်အီးစီပမာဏမှာ ယူနစ် (၂၇) သန်းရှိသည်ဆို၏။ ၂၀၀၈
ခုတွင် နာဂစ်ကိစ္စ ကူညီနေသည့် ကုလသမဂ္ဂစသည့် အဖွဲ့အစည်းများက အက်ဖ်အီးစီကို ပိုသုံးစွဲနေရသဖြင့်
အက်ဖ်အီးစီယူနစ်မှာ (၂၇) သန်းထက် များဖို့သာရှိ၏။
သို့သော် စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်သည့် ကိန်းဂဏန်းများ မယုံကြည်ရကြောင်း နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ ပြောလာ
သည်မှာ အနှစ် (၂၀) မကတော့ပြီ။
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုလည်း စစ်အစိုးရက အမျိုးမျိုးလိမ်၏။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို (၁၃)
ရာနှုန်းရှိသည်ဟု ၀န်ကြီး ဦးစိုးသာက ပြော၏။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စီးပွားရေး တိုးတက်မှုမှာ
(၃.၈) ရာနှုန်းသာရှိသည်ဟု လန်ဒန်အခြစိုက် အီးအိုင်ယူ စီးပွားရေး မဂ္ဂဇင်းကြီးက မှန်း၏။ တဖန် ၂၀၀၇ ခုနှစ်
စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမှာ (၂) ရာနှုန်းနှင့် (၄) ရာနှုန်း ကြားရှိသည်ဟု အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ) တို့က
မှန်း၏။ စစ်အစိုးရ ပြောသည်နှင့် တက်တက်စင်လွဲ၏။
ငွေဖောင်းပွမှုကိုလည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာမှာ (၁၆) ရာနှုန်းသာရှိသည်ဟု ၀န်ကြီး ဦးစိုးသာက ပြော၏။
သို့သော် ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခုနှစ် ငွေဖောင်းပွမှုကို (၃၀) ရာနှုန်းထိ ရှိနိုင်သည်ဟု အေဒီဘီက မှန်း၏။
ငွေဖောင်းပွမှု တိုက်ဖို့အတွက် စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ရှေ့နောက်ညီသည့် စီးပွားရေး ပေါ်လစီများ ချမှတ်ဖို့လိုသည့်
အပြင် ကြိုတင်တွက်ဆ၍ရသည့် စီးပွားရေးပေါ်လစီများ တိုးတက်အောင်လည်းလုပ်ဖို့လိုသည်ဟုပင် အေဒီဘီက အကြံပြုရသည့်အဖြစ်ရောက်၏။
ချုပ်ကြည့်လျှင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီး အရှုံးပေါ်ရသည့် ပြဿနာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေလဲနှုန်း ပြဿ နာမဟုတ်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပြဿနာ၏ အစိတ်အပိုင်းတရပ်သာဖြစ်၏။ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ စီးပွားရေး ကိုင်တွယ်မှု ညံ့ဖျင်း
သည့် ပြဿနာဖြစ်၏။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ထိုမျှ လူစဉ်မမီ ဖြစ်ရသည်မှာလည်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြောင့် ဖြစ်
သည်ကို စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ သိဖို့လို၏။ စီးပွားရေးပြဿနာ ဖြေရှင်းဖို့ဆိုလျှင် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်မှ ဖြစ်မည်ကို
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ နားလည်ဖို့ ကောင်း၏။
မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည် စီးပွားရေးနိုင်နိုင်နင်းနင်း မကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကို ၀န်ခံဖို့အချိန်ရောက်ပြီဟု
ခေတ်ပြိုင်က ထောက်ပြလိုပါ၏။ ။
စီးပွားရေးမနိုင်ကြောင်း စစ်အစိုးရ ၀န်ခံချိန်တန်ပြီ...